Buy YAMAHA MT 09 (0Ks) in ရန်ကုန် on ipivi.com
ကြည့်သူအရေအတွက်: 392 (+2)
Name. YAMAHA MT 09
Model. 2015 ABS
Rate.4ပတ်လည်
ပါဝါ အိတ်ဇော Akapovic full setပေးဦးမယ်
Modified part တွေ ၁၀သိန်းဖိုးလောက်ပါ လက်ဆောင်ပေးဦးမယ်ဗျာ
5. နံပါတ်ပြားအထိုင် ဖန်စီ
8. ဒိုင်ခွက် ကာဗာ
9. Easy clutch
10 . အင်ဂျင်ဘု ဖန်စီ
12. ရေပြန်ဘူး ကာဗာ
ဆက်သွယ်ရမယ့် Ph ကတော့ 09 442073796 မုံရွာ
အမည်: YAMAHA MT 09